‘संविधानको धारा जति पल्टाऊ फेरि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री’ – Classic Khabar
नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सल्लाहकार समेत रहेका नेता विष्णु रिजाल अहिले ओली पक्षमा छन् । केही दिन अघि मात्र उनले नेपालको साथ छोडेका हुन् । उनले सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदवाट विश्वासको मत नपाएपनि फेरि पनि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्।
Nextकोरोनाको जोखिम ह्वातै बढेपछी फेरी बढ्यो काठमाडौमा निषेधाज्ञा : थपिए यस्ता नियम , दैनिक उपभोग्य बस्तुका लागि के गर्ने ? हेर्नुहोस
लब्ली डाँडामा प्रहरी पुग्दा यी युवा युवतीको भयो भागाभाग , लकडाउन बेलामा पनि के गर्दै थिए यी युवा युवती ? (हेर्नुहोस भिडियो)-